Dị ka video edezi software iMovie bụ a ijuanya na e kere site Apple Inc na onye ọrụ kwesịrị gosi na na Filiks na-soro mere na iMovie na-eji na iche na nke QuickTime mere na functionalities nke ma ndị omume na-eji. Iji nweta ndị kasị mma na nke a software omume na-edozi ihe iseokwu ndị ọ na-gwara na-agụ nkuzi ruo ọgwụgwụ. QuickTime na iMovie nwere ike ịbụ a Nchikota na ike mkpatụ onye ọrụ dị ka yiri Filiks na-mere dị mfe ma e nwere ike ihe n'okwu ụfọdụ dị ka mma. A nkuzi ga-edozi ma gbochie nile dị otú ahụ mbipụta si na-eme.
The iMovie ngwa na-abụghị nanị emelite mgbe nile ma ndị ọhụrụ 9.0.9 version enye onye ọrụ na-arụpụta n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Onye ọrụ kwesịrị nwekwara ike ibudata na omume si ukara website nke ụlọ ọrụ dị ka ọ ga-eme ka ụfọdụ na onye ọrụ na-akawanye-enweghị atụ results n'ime chaachaa na mkpokọta arụmọrụ nke usoro ihe omume na-eji na iche na nke wuru na ọrụ ahụ ga- maa ichere na onye ọrụ ọkọkpọhi n'elu nkezi results.
The URL ebe niile nsụgharị nke usoro ihe omume na-enịm na DMG faịlụ ndị na-ebudatara. Tupu nke a, onye ọrụ kwesịrị ka na-elekọta na otutu ohere bụ n'ebe ahụ siri ike mbanye ime needful dị ka ọtụtụ nke faịlụ ndị a ga-ebudatara nwere ihe karịrị 1GB na Ya mere ohere nke bụ biakwa obibia. Ọ nwere ike na-leghaara ma ọ bụrụ na diski ohere e ndenye ji anya. Mbụ mwepụta nke iMovie n'afọ 1999 meghee ọnụ ụzọ nke mmepe nke ụlọ ọrụ na Mac OS 8 e bundled tinyere usoro ihe omume nke ọ bụghị nanị nyere onye ọrụ na ọhụrụ emeghe ụzọ nke kamakwa mere ka o kwe ha ka ha ga-esi na kasị mma si nke usoro ihe omume n'okpuru ajụjụ.
Olee otú Mepee QuickTime Movies na iMovie?
Usoro a ga-soro dị mfe na onye ọrụ kwesịrị gosi na achọrọ nzọụkwụ ga-kwuru na a akụkụ nke nkuzi na-abụghị nanị soro ma ha na-na-etinyere na otu iji nweta nsonaazụ na-mkpa ma ọ bụ chọrọ . Ọ bụ ihu ọma a abụọ akụkụ usoro dị ka nzọụkwụ mbụ na-agụnye exporting na fim QuickTime na akụkụ nke abụọ na-agụnye importing video ka iMovie enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
1. Onye ọrụ kwesịrị iji hụ na QuickTime ngwa na meghere na video a ga-exported na-egwuri iji malite usoro:
2. The ụzọ na bụ mgbe ahụ a ga-agbaso bụ File> bupu mere na video a na-egwuri na-exported ka chọrọ ọnọdụ n'ime usoro:
3. Onye ọrụ kwesịrị ka ichere maka mbupụ na-adabere n'elu size nke video na ozugbo ọ e mere na iMovie ngwa bụ mgbe ahụ ka-oru nke mere na usoro-aga n'ihu:
4. The ụzọ na bụ mgbe ahụ a ga-agbaso bụ File> Bubata mere na iMovie arụmọrụ na-eji:
5. The ọnọdụ site ebe ibubata a chọrọ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem:
6. The video size a na-ahụ ka a mere na ndị kasị mma kwere omume-ele na kachasị iji wuru na usoro nke usoro nke dị n'okpuru ụka. The ibubata button na-enwe na ọgwụgwụ mbubata faịlụ na rụchaa usoro na zuru:
Ntak ike m QuickTime video Bubata iji iMovie?
Azịza nke ajụjụ a bụ pụtara dị mfe dị ka ọ bụ format esemokwu na-eduga na ọnọdụ ahụ. Iji ego na usoro na dechara ọ na-gwara na-elekọta na format converted ka ihe dị dakọtara na iMovie na onye ọrụ kwesịrị iji Wondershare Video Convertor Ultimate mere na ọ bụghị nanị na nsogbu ahụ na-kpebiri ma onye ọrụ ọkọkpọhi pụta na dị na akara na ihe ndị a chọrọ. The URL a ga-eji na-ibudata omume na ọ bụ ukara download njikọ na-ga-ekwe ka onye ọrụ na-ibudata ọhụrụ version si free ikpe nnọọ na a ire ụtọ n'ụzọ. The metụtara isiokwu okwu na ụdị nke zuru ezu na usoro e kwuru ka n'okpuru nke a pụrụ soro na-chọrọ pụta.
Olee otú mbupụ iMovie video ka QuickTime (MOV) video?
Iji nweta ihe ga-esi na akara na ihe ndị a chọrọ ọ na-gwara na-eso usoro na e kwuru ka n'okpuru mere na chọrọ pụta na-atụ anya na-enweta na-enweghị ọtụtụ hassle na nsogbu:
1. The iMovie oru ngo a ga-exported bụ a ga-emeghe na iji iMovie software na-amalite usoro:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka ego na-esonụ na tebụl a na-nyochakwara ka nke mere na fie exporting bụ mgbe otu ihe iseokwu na niile:
3. The bupu button bụ mgbe ahụ na-enwe na nzọụkwụ ọzọ:
4. N'ihi paramount results onye ọrụ nwekwara ike ịgbanwe nkiri ntọala tupu ọ na-dị n'ime QuickTime:
5. The ụzọ na bụ mgbe ahụ a ga-agbaso bụ File> Open File n'ihu n'ihu:
6. The chọrọ faịlụ bụ mgbe ahụ na-dị rụchaa usoro na zuru:
Ọ bụ ezie na mwute iMovie bụ usoro ihe omume na-emepụta a na-egbu Nchikota na ndị ọzọ Apple dabere na ngwa dị ka ndị na-kwuru na ebe a na nkuzi, ndị a niile Filiks bụ ndị dị mfe na-eso na onye ọrụ mere kwesịrị hụ na ndị kasị magburu onwe pụta na-site na-esonụ ha n'ụzọ na-e kọwara ebe a. Importing vidiyo si na QuickTime ka iMovie ga-enwe otu ihe iseokwu n'ihi na onye ọrụ dị ka onu e kọwara na ezu ma n'ụzọ na-dị mfe ịghọta. Ọ bụ ezie na kọwara n'ụzọ zuru ezu na ka ma ọ bụrụ na ọrụ na-eche ihu ọ bụla nke na mmekọrita na doro okwu mgbe ahụ, ọ na-dụrụ anya maka Apple forums na-mbipụta dozie na zuru.
> Resource> QuickTime> mere nwere ike ọ bụghị m QuickTime video Bubata iji iMovie